Ngenisa i-Vancouver yamkela i-Colourist Jimmy Hsu | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Ngenisa i-Vancouver yamkela i-Colourist uJimmy Hsu
Ngenisa i-Vancouver yamkela i-Colourist uJimmy Hsu
Umbala wexesha onomdla uJimmy Hsu ujoyine u-Encore Vancouver, ezisa imvelaphi eguqukayo ekudalweni komxholo kunye nobungcali besayensi kwibala kwinkampani. Uza ku-Encore Vancouver ovela kwi-Side Street Post Production, apho waqala khona njengomhleli we-Intanethi kwi2012 ngaphambi kokugxila kwimigangatho yemibala. Umsebenzi we-Hsu wenza imisebenzi ephilayo kunye neeprojekthi ezi-animation kuzo zonke iintlobo zohlobo, kubandakanya amanqaku, i-movie yemidlalo bhanyabhanya kunye nentengiso yabathengi abanjenge-Universal Studios, iDisney kunye neXesha lokuPhila.
“Faka iVancouver inetalente enkulu yeetalente zamagcisa kwaye iphatha ezinye zeeprojekthi eziphezulu kakhulu kushishino, ke ukujoyina iqela kwakungekho ngqondo. Ndonwabile ukwandisa ububanzi bomsebenzi wam kunye nokongeza ubuchwephesha bam kumxube, utshilo uHsu.
Ngelixa indlela yakhe eya kumgangatho wokubala ibingangqalelanga ngqo, uHsu kudala eyigcina ifilimu. Ukuphumelela kwakhe isidanga kwiDyunivesithi yaseSimon Fraser yaseBritish kwiDyunivesithi yoBugcisa obuDibeneyo kunye neMveliso yeFilim, wabamba iindima ezahlukeneyo kwimveliso nakwimveliso yeposi, kubandakanya njengomhleli wokuyila kunye nomculi wemizobo oshukumayo. Ukuba uhlele ngaphezu kwekhulu iikhilikithi zeemovie, uHsu uyazi kakuhle izinto ezinokuhanjiswa kwiprojekthi kunye nemifanekiso, encedisa ekwazini ngombala wayo. Ukwavela kwimvelaphi yakhe yobugcisa, esondeza ubuchule bamva nje beBlackmagic Da Vinci Resolve ukufakela umsebenzi obalulekileyo wokuqamba kunye nowokubonakalayo kwiiprojekthi zakhe.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli mveliso SJGolden - Imikhonto kunye neentolo IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago 2019-09-24
Previous: Imifanekiso yePace kunye neShockBox VFX Yakha umanyano
next: URob Legato Usebenzisa uyilo lweBlackmagic ukudala imveliso eyiVenkile ye "The Lion King"